Arsenal ayaa si lama filaan ah ugu dhaqaaqday saxiixa weeraryahanka Manchester United Mason Greenwood. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Arsenal ayaa si lama filaan ah ugu dhaqaaqday saxiixa weeraryahanka Manchester United...
Arsenal ayaa si lama filaan ah ugu dhaqaaqday saxiixa weeraryahanka Manchester United Mason Greenwood.
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa mid ka mid ah kooxaha ka fiirsanaya inay u dhaqaaqo Manchester United xidigeeda Mason Greenwood .
20-sano jirkaan ayaa saftay 12 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkan, waxaana loo saadaalinayay inuu noqon doono xiddig mustaqbalka Red Devils, laakiin waxa uu hoos uga dhacay heerka ugu sarreeya bishii la soo dhaafay.
Greenwood ayaan ku soo bilaaban kulan heerka sare ah tan iyo 6dii Noofambar waxana uu ciyaaray kaliya 51 daqiiqo horyaalka intii uu hogaaminayay tababaraha ku meel gaadhka ah ee Ralf Rangnick .
Wargayska El Nacional ee ka soo baxa Spain ayaa sheegaya in xiddiga heerka caalami ee dalka England uu aad uga careysan yahay doorkiisa kooxda koowaad waxaana uu ka xumaaday in Cristiano Ronaldo uu si degdeg ah ugu soo baxay inuu noqdo magaca koowaad ee shaxda kooxda.
Greenwood ayaa lagu soo waramayaa inuu ka fiirsanayo doorkiisa kooxaha kale, iyadoo kooxda ay xafiiltamaan Premier League ee Arsenal ay ka mid tahay kooxaha xiiseynaya saxiixiisa si ay ugu bedelaan Pierre-Emerick Aubameyang .
Si kastaba ha ahaatee, Gunners ayaa tartan kala kulmi karta Barcelona iyo Juventus , kuwaasoo labaduba isha ku haya xaalada Greenwood ee Old Trafford.
Greenwood, oo Man United kula jira heshiis dhacaya 2025, ayaa u dhaliyay 34 gool 122 kulan oo uu u saftay Red Devils.
Dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo la dareemayo Muqdisho, kadib askar lagu soo daadiyey...
Muqdisho (Caasimada Online) – Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa maanta laga dareemayaa dhaq-dhaqaaq ciidan oo xoogleh, kadib markii askar fara badan lagu soo...
Deg Deg Midowga Musharaxiinta oo Isku Khilaafay Mowqifkooda Dagaalka ka socda...
Farmaajo mar labaad kursi ma ku heli doonaa wadaniyad aan fasiraad...
Niklas Sule oo soo dhaweeyay ka ciyaarista Horyaalka Premier League Xili...
Deg deg Farmaajo oo Amisom ka dalbaday in loo keeno Helicopter...
Khasaarooyinkii Farmaajo kasoo gaaray dagaalkii uu la galay R/Wasaare ROOBLE
Shaxda Rasmiga: Newcastle United Vs Manchester City ee Horyaalka Premier League-ga,...